Kyoto University - Study yaseJapan. WeMfundo ePhakamileyo Akude.
Kyoto University Iinkcukacha
isixeko : Sakyo-ku
Zifumaneke : 1897
Musa ukulibala ukuba ukuxoxa University Kyoto
Babhalise kwi University Kyoto
Kususela kwimini eyasekwayo kwi 1897, Kyoto University uye wasebenza ukuhlakulela inkululeko zemfundo phantsi umoya ukuxhomekeka nokuzeyisa-malunga, kwaye ukuvula imimango ezintsha kwimizamo zokudala zabaphengululi. Iyunivesithi uye wafuna ukuba negalelo yayihlalisene ngoxolo kulo lonke uluntu lwehlabathi.
Ihlabathi lethu kungokunje ujongene inani lotshintsho ngokuphindaphindeneyo babengekayicingi kwinkulungwane yama-20. Ubume ungquzulwano jikelele, apho kulindeleke ukuba ukuze zisonjululwe ekupheleni kwaqhambuka iMfazwe, Kwandile ikhula zombini yobumbaxa ngobunzulu ngenxa yobuhlanga nonqulo. Ngaxeshanye, isantya wemo engqongileyo jikelele ibalekisa, iintlekele nanto ezinkulu zizifo ezibulalayo ezosulelayo oluthwaxa kwihlabathi liphela, ezingxakini zemali vuthululani zombini kuqoqosho kazwelonke kunye nobomi ngamnye kanye core. Iiyunivesithi kufuneka sicinge nzulu izinto kuma kula maxesha anzima. Ngelo, urhulumente Japanese esebenza neeyunivesithi kunye noshishino ukukhuthaza ukulinywa lwabantu jikelele, kwaye babiza iiyunivesiti ukuphumeza utshintsho yenzelwe ekukhuliseni ukhuphiswano yabo ngamazwe. ngoku Kyoto University kufuneka ukuba akhethe ngendlela ukusabela kwiimfuno karhulumente kunye noluntu ngokubanzi ngoxa oyinyaniso umoya ekusekweni kwayo.
Zemishini ezintathu ezingundoqo weyunivesithi yimfundo, uphando, kwaye igalelo kwezentlalo. Ezimbini kwezi, uphando kunye igalelo kwezentlalo, badla ukutshintsha ukuphendula kwiindlela zehlabathi. Education, nokuba, umntu uhlobo kubalulekile ukuba mna ndiyakholwa ukuba obungenakudlula. Ngokuhambelana nokuzinikela kwayo kwimfundo elizimeleyo, Kyoto University kufuneka agcine isikhundla sakhe njenge oluqinileyo nenkululeko kwezemfundo, yaxobuka kancinane kuluntu jikelele kunye okunganyanzelekanga samazwe. Ukuze enze oko, eyunivesithi, kufuneka ibe yindawo apho isakha ezifundweni phambili kokuphazanyiswa, ngeli lixa kubonelelwa iifestile ehlabathini kunye noluntu. Ezi iifestile iya kuvulwa ngamalungu yeFakhalthi bexhotyiswe ngolwazi nangokukrola-ngohlangothi ihlabathi kunye noluntu ukuba ubuxoki ngaphaya, kodwa indima ibalulekileyo kwiyunivesithi yethu udlalwa abafundi ebingalingi ngaphandle windows. Kufuneka sisebenze ngononophelo namaqabane kushishino kunye norhulumente ukunika aneefestile kuvumela abafundi ukuba ukusetyenziswa Practical iziphiwo eziqulunqile kwiyunivesithi.
utshintsho maninzi amaphulo aqhubekayo kwimicimbi yemali zeeyunivesithi, kuquka ukuhla nezibonelelo zokusebenza ngokubanzi kunye nogxininiso khulayo mali kukhuphiswano. Kuye kubalulekile ukuba ukufumana imali yethu ukuze enze uphuculo ukuba imeko yemfundo. Ndiyakholwa ukuba kufuneka enze ityala kuluntu ngokubanzi ngokuphathelele imfuneko olu phuculo, ngethemba lokufumana inkxaso nesisa evela amashishini silindele lukhulu kangaka University Kyoto, kwaye befunda zethu. Ndikhangele phambili nokwakha ubambiswano oluluqilima noluntu lwasekuhlaleni, yokuphakamisa iinzuzo indawo yethu Kyoto-ikomkhulu kwihlabathi-babizwe Japanese inkcubeko-nokusebenza kunye nezinye iiyunivesiti ukuphuhlisa sixeko ibe ikhampasi engathethekiyo zemfundo. koko, ukuba sifuna ukuphumelela ekutsaleni fakhalthi ungekayihlawuli abafundi abaphuma kwiiyunivesithi kwihlabathi lonke ukuba, kufuneka siphuhlise iikharityhulam yoqobo kunye neeprojekthi zophando elifeza Ukuxhamla zotyelelo Kyoto ngayo, ize yenziwe uzazise ngamazwe. Ndiqinisekile ukuba imizamo yabo iya kuba negalelo kakhulu ukuba uphuhliso lommandla wethu, kwaye ikamva Japan kunye nehlabathi liphela.
Njengoko ebanzi, iziko lophando-elihlenga, Kyoto University ekufuneka lidibanise zobugcisa zalo melo kunye nemfundo isiseko, zemfundo ezizodwa zesidanga, kwaye ugqibe iinkqubo zemfundo ngeendlela kuxhobisa abafundi bokuyila kunye nesakhono aluncedo. Ukwenza oko kufuna ukuphuhliswa iindlela zemfundo ezifundisa lilungiselelo oluneqela ulwazi nolwahlukileyo oluleko kunye nokuququzelela iintlobo ngeentlobo ukhetho zokufunda. Kuthatha ixesha abafundi baqonde ubuchule babo ngokupheleleyo. Ndiyathemba ukuba singakwazi ukubonelela imeko yokufunda inkxaso apho abafundi ziyakhawuleziswa wenze izigqibo ngokuphathelele ikamva labo, kwaye endaweni unako ukulandela inkqubo ezintle ngamava eziya kubenza ukuba babe nentembelo ngakumbi ikamva ekugqibeleni bakhetha.
Ukuze akwazi ukunceda abafundi nge zenzeko intabalala yabaleka, onke amalungu abasebenzi fakalti kunye nezolawulo kufuneka bazibophelele ekulandeleni uphando kunye igalelo kwezentlalo nakumalinge umdla wabantu bamanye amazwe. Kyoto iDyunivesithi 10 amandla, 18 izikolo isidanga, 14 ngamaziko ophando (kunayo nayiphi na enye iyunivesithi yaseJapan), kunye namanye amaziko emfundo kunye nophando. Ndiya kuya esenza konke okusemandleni am ukuqinisekisa ukuba iinjongo zethu phambili kuwo onke la masebe ezahlukeneyo yunivesiti.
Faculty of Iileta
Graduate School of Studies Human and Environmental
Graduate School of Area Asia and African Studies
Graduate School of yokwazisa
Kyoto University Law School (Text Japanese kuphela)
Ungumhambeli phambili i-Kyoto University waba Chemistry School yasungulwa ngo Osaka ngo 1869, leyo, nakuba igama layo, physics wafundisa kanye. ngelinye ixesha, i Okwesithathu School Higher yasekwa endaweniSeimi-kyoku e 1886, ke idluliselwe nekhampasi engundoqo yangoku yeyunivesithi kulo nyaka.
Kyoto Imperial University njengenxalenye yenkqubo Imperial University yamiselwa ngoJuni 18, 1897, esebenzisa izakhiwo School Higher yesithathu. Isikolo aphezulu safudukela isiqephu sendawo engaphesheya kwendlela, apho Yoshida South Campus limi namhlanje. Kulo nyaka kusungulwa zeyunivesithi, i College of Science and Technology yasekwa. I-College of Law kunye College of Medicine Kwasekwa ku 1899, i College of Iileta 1906, nokwandisa imisebenzi zeyunivesithi ukuya kwiindawo ezingaphandle nenzululwazi yendalo.
Emva kweMfazwe Yehlabathi II, i-University yangoku Kyoto yasekwa yi ukuhlanganisa eyunivesithi yasebukhosini kunye Okwesithathu School Higher, leyo ababephethe umsebenzi wokufundisa ubugcisa zobunene njengoko Faculty of Arts ekhululekile. Sokuzikhethela itshitshisiwe kunye isiseko-Faculty of Integrated Human Studies in 1992.
Kyoto University uye ukususela 2004 zabandakanywa corporation eyunivesithi wesizwe phantsi komthetho omtsha apho usebenza kuzo zonke iiyunivesithi kazwelonke.
Nangona yendlela leyo kukhokelele ekwandeni ukuzimela zemali ukuzimela, University Kyoto usafuna ilawulwa ngokuyinxenye yi-Ofisi yoMphathiswa Japanese weMfundo.
ISebe IYunivesithi ngayo Geophysics lweNtlekele Prevention Research Institute zazo zombini zimelwe kwiKomiti kaZwelonke yokuLungelelanisa Earthquake Ipredikshini.
Uyafuna ukuxoxa University Kyoto ? nawuphi na umbuzo, izimvo okanye ncomo
Ukubuyekezwa Kyoto University
Dibanisa ukuxoxa University Kyoto.